Frequently Asked Questions | Ministry of Finance
အား/ ကာဦးစီးဌာနမှ မေးမြန်းရာတွင် ပင်စင်စား ပြစ်ဒဏ်ကျခံခြင်း မရှိကြောင်းရဲစခန်း ထောက်ခံချက်လို/မလို။
ရဲစခန်းထောက်ခံချက် မလိုကြောင်း၊ ဌာနမှလူတွေ့ ဆုံပြီးဖြစ်၍ ပြစ်ဒဏ်ကျနေခြင်း မဟုတ်ကြောင်း အတည်ပြုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
မကျန်းမာ၍ဘဏ်သို့ မသွားရောက်နိုင်သဖြင့် (၃)နှစ်ခန့် နှစ်လွန်နေပြီး ငွေစာရင်း Account ဖွင့်လှစ်ပြီးပင်စင်လစာ ထည့်သွင်းသည့်စနစ်ဖြစ်၍ စာအုပ်မရှိပါ။ မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရ မည်နည်း။
ပင်စင်စာအုပ်သည် ဘဏ်တွင်အပ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဘဏ်သို့ ဆက်သွယ်ပြီး သွားရောက်ထုတ်ယူ၍ ပုံစံဖြည့်စွက်ပြီး မြို့နယ်/ တိုင်းဦးစီးဌာနတွင် တင်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။ မကျန်းမာ၍ ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ဘဏ်သို့ ကိုယ်တိုင် သွားရောက်၍ ပင်စင်လစာ မထုတ်နိုင်ပါကလည်း ဘဏ်မန်နေဂျာထံ ပင်စင်စား မကျန်းမာကြောင်း ပြောပြပါက ဘဏ်မန်နေဂျာမှ စိစစ်ပြီး လစာထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်။
နိုင်ငံခြားတွင် ရောက်ရှိနေသော အငြိမ်းစားများအတွက် အထူးကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာဖြင့် တိုးမြှင့်ပင်စင် လျှောက်ထားနိုင်ခွင့် ရှိ/ မရှိ လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်ရန် နိုင်ငံခြားတွင် ရောက် ရှိနေသော အငြိမ်းစားများအား အခြားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထားခြင်း ရှိ/ မရှိ ..
မေး။ နိုင်ငံခြားတွင် ရောက်ရှိနေသော အငြိမ်းစားများအတွက် အထူးကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာဖြင့် တိုးမြှင့်ပင်စင် လျှောက်ထားနိုင်ခွင့် ရှိ/ မရှိ လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်ရန် နိုင်ငံခြားတွင် ရောက် ရှိနေသော အငြိမ်းစားများအား အခြားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထားခြင်း ရှိ/ မရှိ စိစစ်တင်ပြရန်၊ လိုအပ်ခြင်းရှိ/ မရှိ လမ်းညွှန်မှု ပေးပါရန်။
ဖြေ။ ကိုယ်တိုင်တောင်းခံလွှာ တင်ရပါမည်။ ပထမအကြိမ်မှာ လူတွေ့စိစစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင်နေထိုင်ကြသော ပင်စင်စားများဟု ဖော်ပြပြီးဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံခြားတွင် အပြီးပြောင်းရွေ့နေထိုင်သူများ အကျုံးမဝင်ပါ။ နိုင်ငံခြားသို့ ခေတ္တသွားရောက်သူများ ပြန်ရောက်ရှိက ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသို့အလည်သွားနေသည့် ပင်စင်စားဆရာမကြီး၏ပင်စင်ကို ကိုယ်စားလုပ်ပေး ၍ရနိုင်ပါသလား။
တိုးမြှင့်ပင်စင်တောင်းခံလွှာကို ကိုယ်တိုင်တင်ရပါမည်။ ထို့ ကြောင့် နိုင်ငံခြားကပြန်လာမှ တာဝန်ခံအရာရှိ(သို့) တောင်းခံလွှာလက်ခံသူအရာရှိကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံ ဆောင်ရွက် ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရက်ကန့် သတ်ချက် မလုပ်ထားပါ။ နောက်ကျ ဆောင်ရွက်၍ ရပါသည်။
ပင်စင်လစာထုတ်ယူခြင်းမရှိသည်မှာ လေးငါးနှစ်ခန့်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သော ပင်စင်စား များပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရှိ/မရှိ၊ ထုတ်ယူခွင့်ရှိပါက ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်။
ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရှိပါသည်။ ပြန်လည်ထုတ်ယူလိုကြောင်း ပင်စင်စားမှထုတ်ယူရန် တောင်းခံလာပါက သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်မှအငြိမ်းစားလက်ခံ၊ ငွေထုတ်ပေးသူ အရာရှိ လက်ခံ၊ အငြိမ်းစား၏လက်ဗွေ၊ ဓါတ်ပုံ၊ ရေးထိုးမြဲလက်မှတ်တို့ကို အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များနှင့်အတူ ပင်စင်လစာထုတ်ပေး သည့်နောက်ဆုံးလကို ဖော်ပြ၍ပင်စင်ဦးစီး ဌာနသို့ပြန်လည်ပေးပို့ ရပါမည်။
( က ) ပင်စင်ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ပြုရန် ကာယကံရှင်၏ လျှောက်လွှာ
( ခ ) ပင်စင်ထုတ်ယူရန် ပျက်ကွက်ရသည့်အကြောင်းရင်း ဖော်ပြချက်
( ဂ ) ၎င်းကာလအတွင်း ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာအပိုင်ရဲစခန်း ၏ထောက်ခံချက်
( ဃ ) ၎င်းကာလတွင်ပြည်ပသို့ထွက်ခွာသွားခြင်းရှိ/မရှိသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်
ဖော်ပြပါအချက်အလက်များပါဝင်သော နှစ်လွန်ပင်စင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာ ပင်စင်ဦးစီးဌာနသို့ ရောက်ရှိလာပါက လျှောက်ထားသူအငြိမ်းစားများ၏ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနသို့ခွင့်ပြုမိန့် အသစ် ပြန်လည်တောင်းခံပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် သို့ သီးခြား အမိန့်စာဖြင့် ငွေပေးမိန့်ထုတ်ပြန်ပေးပါမည်။လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်း များသည်အထက် အပိုဒ်( က )မှ ( ဃ )ထိ အချက်အလက်များ ရယူပြီး ဌာနအကြီးအကဲ၏ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဘဏ္ဌာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံးသည်နေပြည်တော်တွင်သာ ရှိသဖြင့်ရန်ကုန် တွင်နေထိုင်သည့် ဝန်ကြီးရုံးပင်စင်စားများအား ဗဟိုဘဏ်မှတစ်ဆင့်ဝန်ကြီးရုံးသို့ ပေးပို့ ရေးနှင့် အခြားပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ရောက်ရှိနေသောဝန်ကြီးရုံး အငြိမ်းစားများအတွက်....
မေး။ ဘဏ္ဌာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံးသည်နေပြည်တော်တွင်သာ ရှိသဖြင့်ရန်ကုန် တွင်နေထိုင်သည့် ဝန်ကြီးရုံးပင်စင်စားများအား ဗဟိုဘဏ်မှတစ်ဆင့်ဝန်ကြီးရုံးသို့ ပေးပို့ ရေးနှင့် အခြားပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ရောက်ရှိနေသောဝန်ကြီးရုံး အငြိမ်းစားများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပင်စင်ဦးစီးဌာနရုံးခွဲများမှတစ်ဆင့် ဝန်ကြီးရုံးသို့ပေးပို့ ရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်။
ဖြေ။ အဆိုပြုချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်။ ( ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ပြည်နယ်ရုံးများရှိသဖြင့် မြို့နယ်ဖြစ်ပါက ဘဏ္ဌာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဌာန၊မြို့ နယ်ရုံး၊ဘဏ်တို့ မှ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ) နှစ်လွန်/နိုင်ငံခြား/လုပ်သက်ဆက်
ပင်စင်စားတစ်ဦးမှမေးမြန်းရာတွင် ၎င်းတာဝန်ပြီးဆုံးလို့ပင်စင်ယူတဲ့မြို့ က တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး သူနေထိုင်ရာကတခြား တစ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်ဘယ်လို သွားရမှာလဲ။
ပင်စင်စားရှိနေတဲ့မြို့ မှာ ရုံးခွဲရှိတယ်ဆိုရင်အဲဒီရုံးခွဲက ပင်စင်တောင်းခံလွှာကို ထုတ်ပေး ပြီး ပင်စင်စား၏လစာငွေတောင်းခံလွှာကို လူတွေ့ စိစစ်ပြီးလက်ခံပါ။ ဒုတိယစာမျက်နှာ ၏ တာဝန်ခံအရာရှိနေရာမှာရုံးခွဲက လက်မှတ်ထိုးပြီးမှ တိုးမြှင့်ပင်စင်တောင်းခံလွှာ၏ တတိယစာမျက်နှာမှာ လက်မှတ်ထိုးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အကြီးအကဲ(သို့ ) အာဏာခွဲဝေ ပေးထား သူရှိတဲ့နေရာကိုပို့ ပေးပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပင်စင်စားများ ဘဏ်မှာပင်စင်လစာထုတ်ရန် တင်ထားသောကြောင့်စာအုပ်က ဘဏ်မှာရောက်နေပါတယ်။ တိုးမြှင့်ပင်စင်တင်ရန် စာအုပ်သွားတောင်းသောအခါဘဏ် ကပြန်မပေးဘူးလို့ ပြောပါသည်။ လစာထုတ်ပြီးမှပြန်ပေးပါမည်ဟုပြောပါသည်။ မည်ကဲ့ သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
ပင်စင်စား၏ ဆန္ဒအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဘဏ်ကို ညှိနှိုင်းပေးပါမည်။
၁.၄.၂၀၀၆မတိုင်မီနိုင်ငံရေးပင်စင်စားများအတွက်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသဖြင့် ၂၀၁၀တွင် သက်ပြည့်နိုင်ငံရေးပင်စင်ရရှိသည့် နိုင်ငံရေးပင်စင်စားများ တိုးမြှင့်ပင်စင်ရ/မရ
၁.၄.၂၀၀၆မတိုင်မီတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အသက်( ၆၀ )ပြည့်၍ ပင်စင်လစာစတင်ခံ စားခွင့်သည် ၁.၄.၂၀၀၆ နောက်ပိုင်းဖြစ်သော်လည်း အကျုံးဝင်ပါသည်။
အဆိုပါပုံစံ၏ စာမျက်နှာ(၃)တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ချုပ်(သို့မဟုတ်) လွှတ်တော်ရုံး ညွှန်ချုပ် မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် ရေးထိုးရမည်နည်း?
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ချုပ် (သို့ မဟုတ်)၎င်းအာဏာခွဲဝေပေးထားသူအရာရှိ
ဝန်ထမ်း(အငြိမ်းစား) တိုးမြှင့်ပုံစံကိုသာ အသုံးပြုရမည်ဆိုပါက စာမျက်နှာ(၂)တွင် တာဝန်ခံအရာရှိ ဖြည့်စွက်လက်မှတ် ရေးထိုးရမည့်သူမှာ လွှတ်တော်ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးရန် လို/မလို။
အရာရှိတစ်ဦး တာဝန်ယူ လက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်ပါသည်။
တိုးမြှင့်နိုင်ငံရေးပင်စင်တောင်းခံရန် သီးခြားသတ်မှတ်ပုံစံ ရှိ/ မရှိ။
မြို့ပြဝန်ထမ်းပုံစံကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သီးခြား သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။
နိုင်ငံရေးပင်စင်လစာနှင့် ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါသည်။
( ၁.၄.၂၀၀၆ ) မတိုင်မီ နိုင်ငံရေး ပင်စင်စားများ၏ ပင်စင်လစာ (ယခင် နိုင်ငံရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် ရရှိခဲ့သော လစာအား) ၁.၁.၂၀၁၀တွင် တိုးမြှင့်လစာနှုန်းထားများနှင့် ကိုက်ညှိ၍ ရာထူးအဆင့်အလိုက် တိုးမြှင့်ခံစားခွင့် ပြုမှာဖြစ်ပါသည်။ (နိုင်ငံရေးပင်စင် လစာခံစား နေသူများ အတွက်လည်း ၁.၄.၂၀၀၆) ခုနှစ် မတိုင်မီ နိုင်ငံရေးပင်စင်စားများ၏ ပင်စင်လစာကို မြို့ပြဝန်ထမ်း ရာထူး လစာနှုန်းထားနှင့် လစာတူညီရာအတိုင်း ကိုက်ညှိ၍ အမြင့်ဆုံးရရှိမည့် ပင်စင်လစာသို့ တိုးမြှင့်ခံစားခွင့်ပြုမှာ ဖြစ်ပါသည်။)
တိုးမြှင့်ပင်စင်လစာတွင် မိသားစုပင်စင် လစာ ပါဝင်မှု အချိုးပိုများသည်ဟု သိရှိရပါ သဖြင့် မိသားစု ပင်စင် လစာ ထုတ်ယူသူ အရေအတွက် မည်မျှရှိပါသနည်း?
တိုးမြှင့်ပင်စင်လစာခံစားမည့် အင်အား ရှစ်သိန်းကျော်တွင် ယခုလက်ရှိ မိသားစု ပင်စင်စား အင်အား( ၁၆၀၀၀၀ )ကျော်သာရှိသော်လည်း မိသားစုပင်စင် အသစ်ထပ်မံ လျှောက်ထားသူများ ရှိပါက ယခုထက် ပိုမိုတိုးတက်ဖွယ်ရှိပါသည်။
တိုးမြှင့်ပင်စင်လစာတောင်းခံလွှာ တင်ရမည့်ရက်ကို အပြင်မှာ ဇူလိုင်လကုန် နောက်ဆုံးဟု သတင်းကြားသည့်အတွက်ကြောင့် ဘယ်နေ့နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ထားပါသလဲ?
နောက်ဆုံးရက်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ နိုင်ငံတော်မှခွင့်ပြုသည့် တိုးမြှင့်ပင်စင် ခံစားခွင့်ကို ခံစားခွင့်ရှိသူသည် ကာလအကန့်အသတ်မရှိ တောင်းခံ ခံစားသွားရန် ဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်ရှိ ရုံးခွဲများသို့ ဖြန့်ခွဲပေးမှာဖြစ်၍ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် တာဝန်ခံအရာရှိများကိုပဲ ဌာနအကြီးအကဲနေရာ လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့် ရှိ/ မရှိ
ရှိပါသည်။ သို့သော် လက်မှတ်ထိုးသူသည် ပင်စင်စားထက် တစ်ဆင့်မြင့်ရာထူးရှိရပါမည်။ ထိုအမှုတွဲမျိုးကို လက်မှတ်ထိုးနိုင်သူရှိရာရုံးသို့ သတင်းပို့လျှင် ရပါသည်။
တိုးမြှင့်ပင်စင်လစာထုတ်ယူခွင့်ရရှိဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေမှာ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်သတင်းပို့ရမယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ တကယ်လို့ သက်ကြီးပင်စင်စားတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းနေသူများ ပါလို့ရှိရင် ဘယ်လိုစီစဉ်နိုင်ပါသလဲ?
သက်ကြီးပင်စင်စားတွေကို သက်ဆိုင်ရာဌာန တာဝန်ခံအရာရှိ၊ ကိုယ်စားလှယ်အရာရှိ စေလွှတ်ပြီး လူတွေ့နိုင်အောင် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ ဆောင်ရွက်ထားပါမည်။
ယခုတိုးမြှင့်မှုတွင် လစာကို(၂၀၁၀)မတိုင်မီ ခံစားရသူများအားလုံးအကျုံးဝင်ပါသလား။
( ၁.၁.၂၀၁၀ )နေ့ မတိုင်မီ ပင်စင်ခံစားခွင့်ရရှိခဲ့သော ပင်စင်စားများအားလုံး အကျုံးဝင်၊ ပါဝင်ပါသည်။
ပင်စင်လစာတိုးမြှင့်မှုတွင် မည်သည့်ပင်စင်အမျိုးအစားများ ပါဝင်ပါသလဲ?
ပင်စင်လစာတိုးမြှင့်မှုတွင် စစ်ဘက်၊နယ်ဘက်ခံစားခွင့်ရှိသော ပင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး အကျုံးဝင်၊ ပါဝင်ပါသည်။
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ ပင်စင်လစာများအား တိုးမြှင့်သတ်မှတ်သည့် နှုန်းထားများအပေါ် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါသည်။
ယခုတိုးမြှင့်ပေးသော ပင်စင်လစာသည် အဆဖြင့်လည်းကောင်း၊ နှုန်းထားဖြင့်လည်း ကောင်း တိုးမြှင့်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယနေ့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် တန်းတူ ပင်စင်လစာ အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခင် ပင်စင် ခံစားစဉ်က ထုတ်ယူ ရရှိသော နောက်ဆုံးထုတ် လစာအား (၁.၁.၂၀၁၀)ရက်နေ့တွင် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်သော လစာနှုန်းထားအရ ရရှိမည့်နောက်ဆုံး ထုတ်လစာနှင့် ကိုက်ညှိ၍ တိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။